PEAR KOKINSKAYA: SHARAXAAD, FAA'IIDOOYIN IYO FAA'IIDO DARRO, BEERID IYO DARYEEL - KU'SAABSAN
Qeexida noocyo of pear Kokinsky
Kokinskaya - xilliga deyrta ee xilliga dayrta, oo lagu magacaabo Kokinsky Institute of Horticulture, halkaas oo lagu xardhay iyada oo laga gudbayo laba nooc: Popular iyo Cure. Qoraaga ee kala duwan ee la helay waa A. A. Vysotsky.
Ma taqaanaa? Giriiggii qadiimiga ahaa, isteroberi ayaa loo keenay tuulooyinka Aphrodite iyo Hera, oo ku yaalla Rome Ancient waxay u heellanayeen Juno iyo Venus. Muujinta dadyowga labadaba, ilaahyadani waxay calaamad u yihiin bacriminta. Inta lagu jiro badda badda safarka iyadoo la adeegsanayo isteroberi waxay cirib tirtay calaamadaha badda.
Heerka dhirta Kokinskaya waa ilaa afar mitir, dhexroorka taajka waa ilaa saddex mitir. Jirbigu waa mid toosan, caato ah, laantu way ka soo dhexjiraan jirridda xagasha. Taajka ma aha mid aad u qaro, wuxuu u baahan yahay manjooyin, qaabka taajka waa pyramidal. Fruiting bilaabmaa sanadka afraad, dhalidda waa dherer badan - geedo bisleed dhalaan ilaa 100 kg oo isteroberi ah.
Kala duwan waa jiilaalka-adag, dhaxan adag marka kelyuhu ay barafoobaan, dhalidda ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo, laakiin geedka laftiisa ma dhimanayo. Kochinska pear kala duwan ayaa lagu sharaxay sida adkaysi u ah cudurrada sida qolof. In yar u adkaysta qolofta waa caleenta cagaarka.
Isteroberi ayaa lagu rakibay qaab adag oo adag, dheer, dheer, qaabka gogosha. Miraha waxaa lagu rinjiyeeyaa midab cagaaran, sida ay u bislaan noqdaan huruud ah, isteroberi, u jeestay qorraxda, waxay ku daboolaan foorari casaan-casaan. Cunto miro ah ee pear Kokinska gaaro 250 garaam, jidhka waa creamem cad, casiir leh, wuxuu leeyahay dhadhan macmacaan macaan oo leh xoogaa macaan.
Faa'iidooyinka Kokinska pear waxaa ka mid ah dhalidda sare, mudada kaydinta ee qaboojiyaha, caabbinta barafowga, iska caabinta miro u cudurada iyo caajis. Miraha of pear leeyihiin dhadhan dhalaalaya iyo miisaan weyn, marka lagu daro, waqtiga Bisaylkiisa pear Kokinsky oggol yahay iiddii on miraha ee September. Miraha waxay ku habboon yihiin cusub iyo goosashada xilliga qaboobaha.
Dhibaatooyinka: inkastoo difaaca sare ee miro-dhalinta si ay u kabaan iyo cudurrada kale, caleenta waxay u nugul yihiin iyaga. Waxaa jira caabbinta barafowga, laakiin xilliga dayrta xooggan ee heerkulka, kelyaha ayaa laga yaabaa in la qaboojiyo, taas oo saameyn doonta fruiting.
Si guul leh u koraan pear, waxaad u baahan tahay inaad ogaato wax walba oo ku saabsan shuruudaha, xaaladaha iyo ku haboon goobta Kokinsky pear landing. Taariikuhu wuxuu ku xiran yahay xaaladaha cimilada ee gobolka. In cimilada waqooyi, waxaa ka wanaagsan inaad gasho guga ee April, ee cimilada diiran iyada oo aan dhaxan habeen. Gobollada horaanta gu'ga, waxaa wanaagsan in dib loo dhigo habka dayrta, illaa iyo Sebtembar. Cimilada kulul badanaa waxay sababtaa dhirta dhalinyarada ah inay qalajiso. Tan iyo dhirta uusan u dulqaadan transplantation, geedo of pear Kokinskaya waa in la isla markiiba loo beeray si joogto ah. Pear ku habboon dhexdhexaad ah, carrada dabacsan leh dheecaan wanaagsan. Maaha meel la isku qurxiyo oo ku taal dhulka biyaha, oo leh istaabashada qoyaanka, nidaamka xididka ayaa saameeya bakteeriyada fangas. Geedka waxaad u baahan tahay inaad dooratid si wanaagsan oo iftiin leh, hawo leh, laakiin aan lahayn meel qabyo ah. Kuwa ugu fiican waa galbeedka, koonfur galbeed ama dhinaca koonfureed ee beerta.
Sida laga soo xigtay xeerarka agrotechnology for pear Kokinskaya sawirka for beerto waxaa loo diyaariyey horay. Goobta ayaa la qoday, la nadiifiyey haramaha waxayna samaysaa 10 kg oo ah humus halkii mitir iyo 100 g nitrophos.
Pit for geedo guga waa la diyaariyaa dayrta. Xajmiga qiiqa: 70 x 70 mitir oo qoto dheer. Dheecaan ayaa lagu ridayaa hoose ee ceelka, laga bilaabo kore - lakabka humus ama compost ilaa 20 cm, daboolay ciidda. By dhirta beerto dayrta diyaarisay saddex toddobaad. Isku dar ah ciidda waxaa loo diyaariyey lakabka nafaqada ee carrada, peat, humus ee qaybo siman, iyada oo lagu daro 20 g of bacriminta fosfooraska-potassium iyo 100 g oo ash. Wixii beerta pear Kokinsky ayaa soo xushay nuqulo laba sano ah oo geedo ah, oo leh jilif midab leh oo siman. Laamihii yaryar oo caafimaad qaba waa dabacsanaan, xididdada ayaa qoyan iyo iftiin ah jarista. Ka hor inta aan la marin hababka, xididada waxaa lagu dhajiyaa xal kedis ah maalin. Ka dib markii la gaabiyo xididada ilaa 10 cm, iyo caleemaha dhinaca la gooyaa. Dhirta dhererka dhexe ee sapling wanaagsan waa ilaa 85 cm, sapling waxaa hoos loo dhigaa godka, toosiyey xididada iyo rusheeyeen ciidda, waxoogaa tamping. Qoorta asalka ah ee seedling waa in fogaan ah 3 cm dusha dhulka. Ka dib markii laga beerto, abuurka ayaa si badan u waraabiyey, marka ciidda ceelka ay degeen, rusheeyeen ilaa sare. Dhammaadka beerashada, ciidda waa la googooyaa oo taageero ayaa loo asaasay pear.
Waa muhiim! Mulch waa inaysan taabanin jilifka jirridda, xoqida ayaa dhici karta. Dheji mulch meel fog oo ka timaada jiritaanka seedling.
Musqulaha daryeelka ee Kokinskaya noocyo pear ah
Wixii pears Kokinsky, deriska saxda ah waa muhiim marka beeridda iyo daryeelka. Geedka tufaaxu wuxuu noqon doonaa deriska ugu wanaagsan, looma jeedin in lagu beero meel dhagax buur ah: geedo waxay leeyihiin cuduro isku mid ah iyo cayayaanka.
Ka hortagga ugu fiican ee pear-ka wuxuu noqon doonaa mid wakhti haboon oo daryeel leh. Geedkii geedeed waa in la nadiifiyaa, dabacsanaa, iyo carrada lagu daboolaa. Ka saar haruurka dhammaan caleenta iyo caleemaha dhacday. Caleemaha qalalan iyo kuwa daciifka ah oo ku xiran manjooyin nadaafadeed, waraabinta waa in si habboon loo soo daayo, isla sidaasna waxay khuseysaa dharka.
Ka dib markii pear dhibco caleenta, geedi socodka qoryaha Bordeaux ama xal sulfate naxaas - waxay yarayn doontaa boqolkiiba cudurrada. Diyaarinta kiimikada ayaa la cuni karaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, iyo inta lagu jiro goosashada iyaga oo aan halis ugu jirin caafimaadkooda. Miraha kiiskaan waxaa lagu kaydin doonaa waqti dheer. Biopreparations ugu fiican waa: "Fitosporin-M", "Farmod", "Trichodermin", "Hamair", "Fitolavin", "Planriz". Taxanahan, Gaupsin ayaa si gaar ah u caanbaxday, isagoo leh hanti fangasis ah iyo guryaha cayayaanka. Daroogooyinkaas ayaa si wax ku ool ah u burburiya fungal, bakteeriyo iyo fayras, "Gaupsin" ayaa sidoo kale ka caawiya cayayaanka.
Waraabinta, dabacsan iyo jaridda
Cawska koowaad ee isdabajooga oo ku filan hal mar toddobaadkii, laba baaldiyo geed. Marka uu geedku koro, inta jeer ee la waraabiyo waraabinta waa la dhimi karaa laba jeer bishii, laakiin qiyaasta ayaa kordhay. Cayayaanka qaangaarka ah waa in lagu qoyaa rushaynta. U hubso inaad dabacsan tahay helitaanka hawada ee nidaamka xididka iyo jaridda dhirta. Kadib dhammaan geedi socodka, ciidda waa la googooyaa si loo ilaaliyo qoyaanka.
Saddex ilaa shan sano, koofiyadaha Kokinska waxaa la bacrimiyo Bacriminta dabiiciga ah. Maadooyinka macdanta waxay sanad kasta ka qayb qaataan, maaddaama tiro badan oo nafaqo ah ay u baxaan si ay u goostaan. Waxaa lagu talinayaa in la dalbado bacriminta si loo qodo goobo ku dhow goobaha jirridda, iyaga oo isku dhafan dhulka si aanay u gubin xididada. Si wadajir ah ula dabiici karo sheyga fosfooraska-potassium (40 g), daboolaya humus. Sannadaha marka xaalada dabiiciga ah aan la isticmaalin, bacriminta macdanta ah ee isku dhafan.
Digniin! Pear ma jecla nitrogen xad-dhaaf ah. Bacriminta oo leh content nitrogen sare waxaa lagu dabaqay tiro yar, haddii kale waxay saameyn doontaa dhalidda.
Manjooyin sax ah
Gooyo ayaa door muhiim ah ka ciyaara daryeelka caafimaadka Kokinsky. Nidaamka sameynta kobcinta taajka waxaa la sameeyaa sanadaha ugu horreeya ee nolosha geedka. Canugyo badan ayaa midho u dhali kara, laamooduna way jabi karaan miisaanka midhaha, sidaa daraadeed, leh manjooyin qaabeyn ah, kuwa ugu xoogan ee toosan ayaa laga tegayaa.
Geedo nadiif ah ayaa ka baxaya laamood oo daciif ah, qallalan ama la qaboojiyey, sidoo kale waxay sii kordhayaan qoto dheer ee taajka waxayna farageliyaan koritaanka laanta waaweyn. Geedo nadiifin ah ayaa la sameeyaa horraanta gu'ga ama dayrta ka dib marka caleen dayrta dhacdo sanad walba. Nidaamku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajisid cufnaanta taajka oo aad ka qaadid caleemaha jiran. Guga, caleemaha sanadlaha ah ee sanadkii la soo dhaafay ayaa la gooyaa saddex meelood meel oo dherer ah. Rejuven pears budada waa la gooyaa jirridda dhinaca laamaha, gooyaa qaar ka mid ah laamaha qalfoofka si loo xaqiijiyo dharka nacas ah ee nafaqooyinka oo dhan caleemaha. Nidaamkani wuxuu kordhiyaa dhirta geedka.
Marka goosashada iyo sida loo kaydiyo noocyo goosashada ee miro Kokinskaya
Wax soo saarka Kokinsky pear waa sare - ilaa boqol kiilo oo isteroberi ah geed ka weyn. Miraha waxay u bislaadaan usbuuca ugu horeeya ee bisha Sebtembar. Marka si buuxda u bislaaday, pear waxaa si fudud laga saaro asliga ah, midhaha bislaado wuxuu leeyahay caraf udgoon iyo jilicsan.
Waa muhiim! Isteroberi ayaa lagula talinayaa in laga saaro geedka marka ay ka qallajiyaan dhar, haddii kale kaydinta ma noqon doonto mid dheer.
Qaado miraha ka hor wakhtiga qadada si aysan u helin waqti aad u kulul. Midhaha kulul waxaa lagu dabooli doonaa kondhiyan marka la dhigo oo si dhaqso ah u sii xumaato. Si aad uhesho midhaha waa in si taxadar leh loo eegaa, iyada oo aan waxyeello u keenin Bannaanka xayawaanku waxay badanaa isticmaalaan qalab khaas ah oo ku yaalla shool dheer, markaa waxaad ka saari kartaa miro aad u koraya iyada oo aan waxyeello u geysan. Isticmaal isbarbar-dhigo, kala-soocid, tuurida jilicsan ama dhaawacan. Gaadiidka ee isteroberi Kokinsky ma aha mid adag: miraha waxaa la dhigaa sanduuqyada, dib u marin leh balka jilicsan iyo warqad. Heerkulka kaydinta miraha ugu fiican waa -1 ° C ilaa + 2 ° C
Xiiso leh Dalka Shiinaha, xiriir gaar ah oo loogu talagalay in la jeexo: waxaa loo tixgeliyaa calaamad aan dhimanayn. Cudurka khatarta ah waxaa loo tixgeliyaa inuu jebiyo ama uu waxyeeleeyo geed. Si aad ula wadaagto midhaha pearka qof la macno yahay in ay si dhakhso ah ula qeybsadaan qofkaas.
Diyaarinta qabowga qaboobaha
Xilliga jiilaalka, ciidda wareegyada jirridda ee pear Kokin waa in lagu daboolo mulch. Gubashooyinka iyo laantu waxay daboolaan weelka, xirxirta si adag. Geedo dhalinyaro ah ayaa lagu daboolaa caleemo dhoobo, ilaalin jilif ka soo jiirka. In dhirta ilaa shan sano, stem waxaa lagu daaweeyaa xal chalky, ee dadka waaweyn - leh lime. Sida mulch, cawska la isku samaysan yahay waxaa loo isticmaalaa, daboolaya humus ama peat on top.
Midhaha kala duwan ee noocaan ah waxaa loo isticmaalaa noocyo badan oo bannaan ah xilliga jiilaalka, sidaas darteed waa mid aad u caan ah ee bannaanka u. Darajada ma aha mid sax ah oo ka tagaya, jiilaal-adag iyo difaac u ah cudurrada. Ugu fiican ee pear Kokinsky pollinators tixgeliyaan noocyo Yakovlev, Favorite, Bergamot Moscow.